त्यो कति राम्रो शाओमी मी 10 प्रो को अगाडि क्यामेरा छ [समीक्षा] | Androidsis
त्यो कति राम्रो शाओमी एमआई 10 प्रो को अगाडि क्यामेरा छ [समीक्षा]
El शाओमी मी 10 प्रो यो कुनै श doubt्का बिना, यस बर्षको सबैभन्दा उल्लेखनीय उच्च-अन्त हो। यसका साथ फेब्रुअरीमा रिलिज गरियो Snapdragon 865 हुड मुनि र उत्कृष्ट क्यामेरा सेन्सरको साथ, यसले ईर्ष्याको केही पनि नभएको उच्च प्रदर्शन मोबाइलको रूपमा आफैँ राखेको छ।
DxOMark, सामान्य रूपमा सबै भन्दा लोकप्रिय मोबाइलहरु संग, बनाएको छ तपाईंको अगाडिको क्यामेरामा गहिरो स्क्यान, जुन २० MP हो र अपर्चरf/ 20 छ। विश्लेषणमा उसले यस बारे वर्णन गरेको छ, उसले आफ्नो प्रदर्शनको विवरण दिन्छ, र त्यसपछि हामी तपाईंलाई जानकारी दिनेछौं।
1 यो भनेको DxOMark ले शाओमी मी 10 प्रोको फ्रन्ट क्यामेराको प्रदर्शनको बारेमा भन्छ
1.1 भिडियो सेक्सनको बारेमा के हुन्छ?
यो भनेको DxOMark ले शाओमी मी 10 प्रोको फ्रन्ट क्यामेराको प्रदर्शनको बारेमा भन्छ
DxOMark द्वारा दिएको of 83 को अ्कले Xiaomi Mi 10 Pro प्लेटफर्मको फ्रन्ट क्यामेरा रैंकिंगमा मध्यम स्थितिमा राख्छ, मिड-रेन्ज मोबाईलहरू नजिकको जस्तो सैमसंग ग्यालेक्सी A71 वा पुरानो मोडेलहरू जस्तै एप्पलको आईफोन एक्सएस अधिकतम। उसको 84 XNUMX को स्कोर पनि द्वारा प्राप्त एक भन्दा कम छ हुआवेई P40 प्रो केही समय पहिले, जुन १० is हो, तर एमआई १० प्रो सही स्थितिमा सभ्य सेल्फी शटहरू रेकर्ड गर्न सक्षम छ।
Xiaomi Mi 10 Pro फ्रन्ट क्यामेरा स्कोर DxOMark द्वारा
अनुहारको लागी लक्षित जोखिम धेरै जसो परिस्थितिमा राम्रो छ, र क्षेत्रको ठूलो गहिराइको अर्थ ग्रुपको पछाडिका विषयहरू वा सेल्फी स्टिक प्रयोगकर्ताहरू स्वीकार्य तीखोका साथ क्याप्चर भएका छन्। नकारात्मक पक्षमा, सीमित गतिशील दायरा उच्च कन्ट्रास्ट दृश्यहरूमा बरु हस्तक्षेप हाइलाइट क्लिपिंगमा परिणाम दिन्छ, र रंग प्रजनन सुधारको लागि ठाउँ छोड्दछ, DxOMark आफ्नो समीक्षा मा भन्छन्।
केवल धेरै कम प्रकाशमा (१० लक्स वा कम) छविहरू थोरै हल्का देखिन सकिन्छ। जे होस्, यस वर्गका धेरै उपकरणहरू भन्दा गतिशील दायरा अधिक सीमित छ, र पृष्ठभूमि र छाला टोन प्राय: उज्ज्वल अवस्थामा काँटिएको क्षेत्रहरू देखाउन सक्दछ।
रंगको बारेमा, एमआई १० प्रो सामान्यतया उज्ज्वल प्रकाश र सामान्य इनडोर अवस्थामा एक सही सेतो सन्तुलन प्रदान गर्दछ, तर रंग प्रजनन समग्रमा राम्रो छैन। बाहिरी छविहरूमा संतृप्ति थोरै कम हुन सक्छ, र छाला टोन कम प्रकाशमा अप्राकृतिक रूपमा रातो बन्न सक्छ।
शाओमी मी 10 प्रोको अगाडि क्यामेराको साथ इनडोर फोटो DxOMark
शाओमी मी १० प्रो फोकस लेन्सको साथ आउँदछ। जबकि यो एक राम्रो अटोफोकस प्रणाली को रूप मा समान लचिलोपन प्रदान गर्दैन, लेन्सको क्षेत्रको गहिराई एकदम फराकिलो छ। अभ्यासमा, यसको मतलब यो हो कि शार्पनेस लगभग cm० सेमीको शुटि distance दूरीमा राम्रो छ र अझै १२० सेन्टीमिटरमा पनि स्वीकार्य छ।
यसको फ्रन्ट क्यामेरा विवरण क्याप्चर को एक राम्रो काम गर्छविशेष गरी उज्यालो बाहिरी अवस्थाहरूमा, तर अनुहार र पृष्ठभूमिमा छवि शोर पनि राम्रोसँग देखा पर्दछ। इन्डोर सर्तहरूमा एक्युटेन्सको स्तर सायद कम हुन्छ, तर कम प्रकाश अवस्थाहरूमा ड्रप बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो भनियो, उच्च-अंत अझै पनि कम बत्तीमा स्वीकार्य विवरण रेकर्ड गर्दछ।
Boeh मोड एमआई १० प्रोको सेल्फी क्यामेरा अनुमान त्रुटिहरूको साथ DxOMark
एमआई १० प्रोले यसको फ्रन्ट क्यामेरामा बोकेह मोड फिचर गर्दछ, तर यो क्यामेराको बलियो पोइन्टहरू मध्ये एक होईन। प्रणालीले फ्रेममा विषय पत्ता लगाउँदछ र त्यसपछि वरिपरिको सबै चीजहरूलाई ब्लर गर्दछ, समान फोकल प्लेनमा वस्तुहरू समेत। त्यहाँ कुनै ग्रेडियन्ट ब्लर पनि छैन, क्यामेराको साथ पूरै फ्रेममा धमिलो समान राशि लागू गर्दै। साथै, पृष्ठभूमिमा स्पटलाइटहरू धेरै सानो छन् र यसको विपरित अभाव छ। सामान्यतया, शाओमीको बोकेह प्रभाव एकदम अप्राकृतिक हो।
भिडियो सेक्सनको बारेमा के हुन्छ?
एमआई १० प्रोले DxOMark डाटाबेसमा भिडियोको लागि 10१ को स्कोर प्राप्त गर्दछ, जसले यसलाई यस कोटीका लागि प्याकको बीचमा राख्छ। सामान्यतया, विशेषज्ञहरूले अझै पनि छविहरूको लागि उल्लेख गरेका धेरै बल र कमजोरीहरू एम आई १० प्रोको भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ। यसको भिडियो उप-स्कोरहरू निम्नानुसार छन्: एक्सपोजर () 81), रंग (10 66), फोकस ( ))), बनावट () ​​76), आवाज ()१), कलाकृतिहरू ()०) र स्थिरीकरण ()२)।
भिडियो रेकर्ड गर्दा, अनुहारमा लेन्स एक्सपोजर उज्ज्वल प्रकाश र सामान्य इनडोर प्रकाशमा राम्रो छ। एक पटक जब प्रकाशको स्तर १० लक्स भन्दा तल झर्छ, तब एक्सपोजर पनि ड्रप गर्न थाल्छ, र धेरै कम प्रकाशमा चित्रित छविहरू अज्ञात हुन्छन्। अझै छविहरूको रूपमा, गतिशील दायरा सीमित छ, र उच्च कन्ट्रास्ट सर्तहरूमा रेकर्डि almost प्रायः अनिवार्य रूपमा फ्रेमको उज्यालो क्षेत्रमा प्रकाश पार्ने परिणाम दिनेछ।
भिडियोको रंग सुविधाहरू अझै छविहरूको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। छालाको टोनहरू उज्यालो प्रकाशमा र घरभित्रै शूटि very गर्दा धेरै राम्रो उत्पादन हुन्छ, तर तिनीहरू कम प्रकाशमा चित्रित छविहरूमा थोरै अप्राकृतिक देख्न सक्छन्।
उज्यालो पक्षमा, क्यामेराको क्षेत्रको ठूलो गहिराईले विषयहरूमा दृश्यमा ध्यान केन्द्रित राख्न मद्दत गर्दछसमातेको वा प्यानिंग गर्ने क्रममा पनि, र विवरणहरू उज्यालो प्रकाशमा राम्रा छन् जब पूर्ण एचएचडी p 1080० रेजोल्युसनमा शूटिंग गरिन्छ। विस्तृत स्तरहरू १०० लक्ससम्म अझै राम्रो छन्, तर जब चीजहरू अन्धकार हुँदै जान्छन् तब ध्यान दिनुहोस्।
DxOMark रैंकिंगमा एक नयाँ नेता छ, र यो शियाओमी मी १० प्रो हो [क्यामेरा समीक्षा]
दुर्भाग्यवश भिडियो मोड स्थिरिकरण प्रणाली द्वारा अलि निराश छ, जुन क्यामेरा शेक वा हिड्ने गति प्रतिरोध गर्न धेरै प्रभावी छैन, त्यसैले एक जिमबल वा कम्तिमा केही थप ग्रिप प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हुन सक्छ जब मी १० प्रो प्रयोग गर्दा भ्लगिंग वा यस्तै कार्यहरूको लागि। छिटो स्क्रोलिंग गर्दा एक जेली प्रभाव पनि काफी देखिन सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » त्यो कति राम्रो शाओमी एमआई 10 प्रो को अगाडि क्यामेरा छ [समीक्षा]
यी सबै समाचार र सुधारहरू हुन् जुन PUBG मोबाइलको ०. 0.19.0 .XNUMX .० ले अद्यतन गर्दछ: नयाँ अनन्य नक्सा समावेश गर्दछ